Somalia online: Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha Qaraxa laga buuxiyay oo ka dhacay Suuqa Labaad ee Muqdish ugu weyn
Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha Qaraxa laga buuxiyay oo ka dhacay Suuqa Labaad ee Muqdish ugu weyn
Axad, June 17, 2012 (HOL) — Qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qaraxa ay ka buuxaan ayaa goor-dhaweyd ka dhacay suuqa labaad ee Muqdisho ugu weyn ee Suuq Bacaad oo ku yaalla degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid, Muxyadiin Xasan Jurrus oo goobta tagay ayaa saxaafadda u sheegay in qaraxaas ay ku dhaawacmeen saddex qof oo rayid ah, isla markaana aysan jirin wax khasaare dhimasho ah oo uu geystay.
"Qaraxu wuxuu ahaa mid ka dhashay gaari la dhisay jidka dhiniciisa, waxaana inoo suurogashay inaan gacanta ku dhigno ninkii gaarigaas watay," ayuu yiri Muxyadiin Jurrus oo sheegay in weerarkan uu noqday mid fashilmay.
Dadkii ku sugnaa Suuq Bacaad xilligii uu qaraxu dhacayay oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in qaraxu uu ahaa mid xooggan, balse aysan garan karin khasaaraha ka dhashay, waxayna sheegeen in suuqa oo dhan la xiray.
Ciidammo ka tirsan kuwa dowladda KMG ah ayaa isku gadaamay goobta uu qaraxu ka dhacay, iyadoo dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo kii dadka hakad la geliyay, iyadoo ciidamadu ay wadaan baaritaanno.
Qaraxan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee ka dhaca Muqdisho tan iyo markii ay ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa AMISOM gaareen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada hoose.
Ma jirto cid sheegatay inay mas'uul ka tahay weerarkii maanta ka dhacay suuqa labaad ee Muqdisho ugu weyn, iyadoo goobtii uu qaraxu ka dhacay uu qiiq fara badan qariyay.
Dave Lee North America technology reporter 6 hours ago Share this with Facebook Share this with Messenger Share t...
Continue reading the main story The colourful celebration is one of Europe's biggest street parties In pictures: Monday...